QM oo ka cabsi qabta in cudurka Ebola ku faafo dunida – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
QM oo ka cabsi qabta in cudurka Ebola ku faafo dunida
A warsame 1 December 2014
Madaxa Qaramada Midoobey u qaabilsan howlgalka ka hortagga Ebola ee galbeedka Afrika, Tony Banbury, ayaa sheegaya in caabuqan ay weli suura gal tahay inuu ku fido daafaha caalamka.
Bishii October ee sanadkan, Mr Banbury ayaa golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey u sheegay haddii la doonayo in cudurka si buuxda looga hortago, in ugu dambeyn bishan December, loo baahan yahay in boqolkiiba 70 bukaanada xanuunka qaba ay ku sugnaadaan xarumaha caafimaadka, sdioo kale boqolkiiba 70 dhibanayaasha u dhintay Ebola loo aaso si badqab ah.
Dadka qaba xanuunkan ayaa la sheegayaa inaysan imaan xarumaha lagu daaweeyo taas oo keeneysa in cudurka uu sii fido.
Wareysi uu siiyay BBC-da, oo looga qaaday magaalada caasimadda u ah dalka Sierra Leone ee Freetown, Mr Banbury waxa uu si ku celcelis ah u diiday in la gaaray dhammaan wixii la hiigsanayay.
“Waan ku guuleysanay ama waan dhaafnay bartilmaameedyadaasi meelo badan, waxay u badan tahay in goobo badan aan dhaafnay bartilmaamedkaasi.” ayuu yiri asigoo muujinayay in meelaha qaar lagu guuleystay ka hortagidda Ebola.
Balse wuxuu qiray in weli ay jiraan goobo badan oo aan wax badan laga qaban weli, “Balse waxaa jiro meela qaar, oo ay ka mid tahay dalkan Sierra Leone, magaaladan Freetown, iyo Port Loko, oo ah goobaha uu si tirtiib ah hoos ugu dhacayo. Xaqiiqdii waana meelaha aan dooneyno inaan diiradda saarno oo aan ku bixino dhaqaale iyo wixii karaankeena ah, goobahaasi waa kuwa mudnaanta lasiinayo, waa inaan si adag u shaqeynaa si gargaar loo gaarsiiyo meelahaasi ee aynaa ogeyn inaan gaari doono.”
The Rising Costs of US Income Inequality
Camey: Qaar ka mid ah shacabka Puntland ayaa qariya Alshabaab